Ogaysiis-Ogaysiis - Cakaara News
Jigjiga(Cakaaranews) Khamiis 29ka June 2017. waxaa dhamaan bulshada deegaanka la ogaysiinayaa in subaxnimada maalinta sabtida ah uu bilaabmayo tartankii iibsashada guryaha gibiyada ah ee kuyaala wadada wajaale qiimahoodii horana hoos loo dhimay.
Hadaba dhismaha guryahan ayaa ah labo nooc oo kala ah kuwa saaran wajiga hore ee wadada wajaale oo ah darajada 1aad qiimahooduna waa 805,000 (sideed boqol iyo shan kun oo birr ) iyo kuwa darajada 2aad oo ah 690,00 kun ( lix boqol iyo sagaashan kun oo birr) Wuxuuna tartankan gibiyada casriga ah uu ka dhacayaa goobta ay ku yaalaan gibiyadan casriga ah, Wuxuuna tartanku dhacayaa subaxnimada maalinta sabtida ah 2da saac. Waxaana tartamayaasha gibiyadan la ogaysiinayaa in diwaan galinta gibiyadan ay tahay 10,000 birr oo lacag ah iyadoo cida ku guul daraysatana loo celin doono lacagtii diwaangalinta .
Ugu danbayna waxaa tartamayaasha la ogaysiinayaa inaysan moogaanin hanashada iibsashada guryahan casriga ah ee loo talagalay bulshada deegaanka. Waa wakaalada horumarinta guriyaynta DDSI oo idin leh tartan wacan